Messi oo niyadjab ku tilmaamay xili ciyareedkii dhawaan soo idlaaday, sheegayna in Copa America…. – Gool FM
Messi oo niyadjab ku tilmaamay xili ciyareedkii dhawaan soo idlaaday, sheegayna in Copa America….
Dajiye June 6, 2019
(Yurub) 06 Juunyo 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa xaqiijiyay inuu la kulmay xaalad niyadjab iyo daal maskaxeed ah, dhamaadka xilli ciyaareedka dhawaan lasoo xiray.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu Messi kaga hadlay dhinacyo badan ee isaga quseeya.
“Waxaan xili ciyaareedka ku dhameystay niyadjab iyo daal maskaxeed oo ka badan midka jirka ah, kaddib wixii dhacay 15-kii maalmood ee u danbeysay, gaar ahaan ka harista Champions League”.
Messi ayaa ku hogaamiyay kooxdiisa Barcelona ku guuleysiga horyaalka La Liga ee dalka Spain, xili sidoo kale ay gaareen wareega afar dhamaadka Champions League, kahor inta aysan guuldaro kala kulmin Liverpool, waxaana sidoo kale laga badiyay finalkii Copa del Rey ay ku wada ciyaareen kooxda Valencia.
“Waxaan ku qasbanaaday inaan helo nasiino jireed, waxaana ciyaaray in ka yar inta aan ciyaaray sanadii lasoo dhaafay”.
Intaas kaddib Lionel Messi ayaa ka hadlay tartanka dhawaan furmi doono ee Copa America wuxuuna yiri:
“Waxaan ku soo gali doonaa tartanka sida caadiga ah inagoo xiiso iyo baahi u qabna, laakiin xaqiiqda dhabta ah xulka qaranka Argantina wuxuu ku jiraa xaalad kala guur ah, balse waxaan qeyb ka sii ahaan doonaa tartamayaasha sidii aan horey u ahayn”.
“Kama tirsani musharixiinta bilowga, lakiin waan isku dayi doonaa inaan ku guuleysano Copa America, waxaan dareemayaa dareen aad u weyn, waxaan heysanaa koox u gaajeysan ku guuleysiga koob, waxaan dooneynaa inaan sameyno waxyaabo fiican”.
Matteo Messi oo aabahiis si cadawtinimo ah u xasuusiyay guuldarooyinkii Liverpool & Valencia - Miyuuse faham ka heystaa kubadda cagta?
“Ku biirista Hazard ee kooxda Real Madrid waa war u xun Barcelona”